Kiddie Ride Factory - China Kiddie Ride Abavelisi, abaxhasi
Ingqekembe entsha yokufika eqhutywa zii-3D kiddie ride -fire truck ngomatshini wokudubula
Ingqekembe entsha yokufika esebenze ngenqwelomoya yenqwelomoya ekhwela umntwana kunye nomatshini wokudubula wenqwelomoya
2. Ukudityaniswa okugqibeleleyo komatshini wokukhwela umntwana kunye nemidlalo yenqwelomoya，abantwana bayakonwabela ukonwaba xa befumana ukhuthazo kunye nolonwabo kwimidlalo yokusebenzisana! Inomdla ngakumbi, umvuzo ophezulu!
3. Isihlalo esikhulu esiphindwe kabini, esenziwe ngeglasi yefayibha, yomelele kakhulu!
Ingqekembe entsha yokufika esebenze i-3D kiddie ukukhwela idinosaur umatshini wokudubula ibhola
2. Umdibaniso ogqibeleleyo womatshini wokukhwela umntwana kunye nokudubula imidlalo yebhola, abantwana bayakonwabela ukonwaba xa befumana ukhuthazo kunye nokonwaba kwimidlalo yokusebenzisana! Inomdla ngakumbi, umvuzo ophezulu!
Imali esetyenzisiweyo ye-3d yehashe ye-Kiddie Ride yeVidiyo yeMidlalo yeSwing Machine